Kitra malagasy: sady DTN no mpanazatra ny Barea i Nicolas Dupuis | NewsMada
Kitra malagasy: sady DTN no mpanazatra ny Barea i Nicolas Dupuis
Mitohy ny fiaraha-miasan’ny federasiona malagasin’ny baolina kira (FMF) sy i Nicolas Dupuis. Hisahana andraikitra roa goavambe, ity teknisianina frantsay ity, izay manana fanamby hampandrosoana ny kitra Malagasy.
Vita Sonia, omaly alarobia, teny amin’ny foiben-toeran’ny baolina kitra malagasy, teny Isoraka ny fifanekem-piaraha-miasa eo amin’ny federasiona (FMF), sy i Nicolas Dupuis. Nampitomboina ny andraikitr’ity teknisianina frantsay ity, satria ankoatra ny nanekena ny fanalavana ny fotoana hitondrany ny Barea de Madagascar, mbola notendrena ho tale teknika nasionaly ihany koa ny tenany.
Nanaiky ny hetahetan’ny mpankafy baolina kitra, izany ny federasiona malagasin’ny baolina kitra ary nankato ihany koa ny tenin’ny filoham-pirenena, tamin’ny fanitarana ho efa-taona, ny hanazaran’i Dupuis, ny Barea de Madagascar. Ny fitondram-panjakana sy ny federasiona malagasin’ny baolina kitra no hiantsoroka ny karamany. Mitodika any amin’ity vazaha ity avokoa, araka izany, ny mason’ny rehetra, manomboka izao.
Araka ny voalaza, sady hifantina no hanazatra ny ekipam-pirenena malagasy izy, ary hampiroborobo ity taranja ity ihany koa.
Andraikitra goavana miandry an’i Nicolas Dupuis, ny ho fiatrehan’ny Barea de Madagascar, ny fifanintsanana “Can 2021”. Fihaonana, hikatrohan’i Madagasikara, amin’i Etiopia, hatao etsy Mahamasina, ny alahady 10 novambra ho avy izao sy ny fandehanana any Niger, afaka herinandron’io, izany hoe : ny 17 novambra 2019. Fanontaniana mipetraka ny amin’ireo ho mpilalao handrafitra ny Barea de Madagascar. Mbola hiantehitra amin’ireo nentina tany Egypta, ve izy izay efa nisy nahazoazo taona sa hijery lavitra ka hanomana sy hanome sehatra, ireo ho mpandimby atsy ho atsy.
Hanao ahoana ihany koa ny ho endriky ny fifaninanam-pirenena, amin’ity taom-pilalaovana ho avy ity. Izany rehetra izany, hiandrasan’ny rehetra an’i Nicolas Dupuis, amin’izao andraikitra roa tantaniny, izao.